Gufgaf|Online आफ्नै कोस्टारलाई दुर्व्यवहारको आरोप !
आफ्नै कोस्टारलाई दुर्व्यवहारको आरोप !
भारतीय टेलिभिजनको दुनियामा ईच्छाको नामले परिचित भएकी अभिनेत्री टिना दत्त यतिबेला एण्ड टिभिको डायनमा काम गरिरहेकी छिन् । कलर्स च्यानलबाट प्रसारण भएको चर्चित सिरियल उतरनमा काम गरेपछि टिना ईच्छाको रुपमा सबैको प्रिय बनेकी हुन् । पछिल्लो समय डायनमा पनि उनलाई दर्शकले रुचाईरहेका छन् । डायनमा अभिनेता मोहित मल्होत्रा उनको जोडीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । यतिबेला उनले कोस्टार मोहित मल्होत्रालाई ईंटिमेन्ट सिन गर्ने क्रममा गलत तरिकाले छोएको भन्दै दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको कुरा कुरा चर्चामा छ ।
ईंटिमेन्ट सिन गर्ने क्रममा असहज तरिकाले छोएको भन्दै टिना सेटमै रोएकी थिईन् । भारतीय सञ्चारमा उक्त घटनापछि मोहीतलाई त्यसो नगर्न चेतावनी पनि दिईएको थियो । तर उनी नमानेको र आफ्नो हर्कत गर्न नछोडेको उल्लेख छ ।
टिना मात्रै नभयर उक्त शोको टिमले नै ईंटिमेन्ट सिनको क्रममा मोहितले असहज तरिकाले छोएको उल्लेख गरेका छन् । तर मोहितले भने यस विषयमा बोल्दै डायनमा खासै ईंटिमेन्ट सिन नभएको र आफूले त्यस्तो व्यवहार नगरेको बताएका छन् । त्यस्तै अभिनेत्री टिना र आफू मिल्ने साथी भएको र आफूहरुबिच त्यस्तो समस्या नभएको मोहितको भनाई छ ।
उता टिनाले भने भारतीय सञ्चार माध्ययमसँग कुरा गर्दै काम गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरु आउने बताउँदै यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मा आफ्नो टिमलाई नै दिएको बताएकी छिन् । लामो समय पछि बालाजी टेलिफिल्मसँग काम गर्न पाउँदा आफूलाई निकै खुशी लागेको र यो मामिलामा एक्शन लिने जिम्मा बालाजीलाई नै दिएको टिनाले उल्लेख गरेकी छिन् । टिनाको कुरा अनुसार उनले सेटमा समस्या भोगेको बुझिन्छ तर मोहितले भने यो कुरालाई अस्विकार गरेका छन् ।